News - Ku rakibida iyo dayactirka fureyaasha adduunka
Rakibaadda iyo dayactirka filtarka adduunka
Gawaarida Globe ee shaqeynaya, dhammaan noocyada kala duwan ee qaybaha waalka waa inay ahaadaan kuwo dhameystiran oo aan hagaagsaneyn. Handarraabbadeedii oo ku saabsan flange iyo qaybta waa lagama maarmaan. Mawduucu waa inuu ahaadaa mid aan la oggolaanayn in la furfuro. Ku xirista lowska lugta, haddii la arko dabacsan waa in lagu adkeeya waqtiga, si aan loo xirmin isku xirka ama lumin lugta gacmaha iyo magaca. Haddii lugaha gacmaha ee waalka adduunka uu lumo, baaxadda la hagaajin karo looma oggola in la isticmaalo taas beddelkeedana waa in lagu qalabeeyaa waqtiga. Qanjirka wax lagu shubo looma oggola inuu qallajiyo ama uusan lahayn wax nadiifin ah oo horay loo sii rakibo. Daboolka kahortaga waa in lagu dhejiyaa jirida wiishka adduunka ee jawiga sida fudud u wasakheeya roobka, barafka, boodhka, ciidda iyo wasakhda kale. Qiyaasta galka dunidu waa inuu ahaadaa mid dhameystiran, sax ah oo cad. Shaabadda, daboolka iyo qalabka pneumatic ee waalka adduunka waa inuu ahaadaa mid dhameystiran oo aan hagaagsaneyn. Ha garaacin, ha istaagin ama ha taageerin walxaha culus ee wiishka adduunka ku shaqeeya; Farsamooyinka aan birta ahayn iyo birta birta ah, gaar ahaan, inbadan ayaa joojin doonta waalka shaqada dayactirka ee soosaarka waxsoosaarka alxanka kahor iyo kadib dayactirka mihnadlaha, ee waalka adeegga howlaha waxsoosaarka ayaa door muhiim ah leh, habeyn iyo habeyn wax ku ool ah wuxuu ilaalin doonaa waalka midig, waalka si sax ah u shaqeynaya, wuxuuna dheereynayaa nolosha adeegga waalka. Dayactirka qalabku wuxuu umuuqan karaa mid fudud, laakiin maahan. Badanaa waxaa jira dhinacyo shaqada laga iloobo.
Marka hore, marka waalka dunidu uu dufan yahay, dhibaatada cirbadeynta dufanka badanaa waa la iska indhatiraa. Ka dib buuxinta dufanka, hawlwadeenku wuxuu doortaa waalka iyo qaabka isku xirnaanta dufanka wuxuuna fuliyaa hawlgalka buuxinta dufanka. Waxaa jira laba xaaladood: hal dhinac, xaddiga cirbadeynta dufanka ayaa ka yar, dusha sare ee xirana dhaqso ayaa loo xiraa sababtoo ah saliid la'aan. Dhanka kale, cirbadeynta xad dhaafka ah ee dufanka, taasoo keenta qashin. Ma jiro xisaab sax ah oo ku saabsan awoodda wax lagu xiro ee kala-baxayaasha kala duwan ee adduunka marka loo eego nooca iyo nooca filtarka. Awoodda xiritaanka waxaa lagu xisaabin karaa cabbirka iyo qaybta ka mid ah waalka la jaray, ka dibna waxaa lagu durayaa qadar macquul ah oo dufan ah.
Marka labaad, dhibaatada cadaadiska badanaa waa la iska indhatiraa marka waalka adduunka uu dufan yahay. Inta lagu jiro hawlgalka cirbadeynta dufanka, cadaadiska cirbadeynta dufanku si joogto ah ayey isu beddelaysaa meelaha ugu sarreeya iyo dooxooyinka. Cadaadisku aad ayuu u hooseeyaa, shaabadu way sii daadanaysaa ama way baaqanaysaa, cadaadisku aad buu u sarreeyaa, afka dufanka ayaa xanniban, dufanka ku jira shaabadda waa la adkeeyay ama giraanta wax lagu xidho ayaa lagu xidhay kubbadda waalka iyo saxanka waalka. Badanaa, marka cadaadiska dufanka uu aad u hooseeyo, dufanka la isku duray ayaa ku qulqulaya salka qolka waalka, kaas oo guud ahaan ku dhaca matoorrada yaryar ee urka yar. Cadaadiska dufankuna aad ayuu u sarreeyaa, hal dhinac, ka fiiri qaanuunka dufanka, oo ku beddel haddii dufanka dufanka xayiran yahay; Dhinaca kale waa adkeynta dufanka, si loogu isticmaalo dheecaanka nadiifinta, si isdaba joog ah u jilciso fashilka dufanka xirashada, iyo duritaanka dufanka cusub. Intaa waxaa dheer, nooca wax lagu xiro iyo qalabka wax lagu xiro ayaa sidoo kale saameeya cadaadiska dufanka. Noocyo kala duwan oo shaabad ah ayaa leh cadaadis dufan oo kala duwan. Guud ahaan, cadaadiska dufanka ee shaabadda adag ayaa ka sarreeya kan jilicsan. Dayactirka kubbadda akhrisku guud ahaan waa gobolka furan, duruufaha gaarka ah ayaa doorta in la xiro dayactirka. Qalabyada kale ma wada noqon karaan in la furo boos. Waalka albaabku waa inuu xirnaadaa inta lagu guda jiro dayactirka si loo hubiyo in dufanka uu ka buuxo jeexdin shaabad leh oo ay weheliso giraanta wax lagu xiro. Hadday furan tahay, dufanka wax lagu xidho ayaa si toos ah ugu dhici doona kanaalka socodka ama qolka waalka, taasoo sababi doonta qashin.
Ka dib rakibidda, waalka adduunka waa in si joogto ah loo kormeeraa. Waxyaabaha kormeerka ugu muhiimsan waa sida soo socota:
(1) xirashada dusha sare ee daalka dunta.
(2) Dharka dunta trapezoidal ee jirridda iyo jirida.
(3) Inay xirxirantu dhacday iyo inay ansax tahay. Hadduu waxyeello gaadhay, waa in lagu beddelaa waqtiga.
(4) ka dib dib-u-hagaajinta iyo isku-darka waalka adduunka, tijaabada waxqabadka shaabadaynta waa in la sameeyaa.
Waqtiga boostada: Jul-20-2021